Baidoa Media Center » Xaqiraadda Shacbiga iyo Ansixinta Xeerka Qaranka.(Fiidiyow)
Xaqiraadda Shacbiga iyo Ansixinta Xeerka Qaranka.(Fiidiyow)
August 12, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Waxaa xaq u leh in ay Xeerka Qaranka Soomaaliyeed ansixiyaan shacbiga Soomaaliyeed ama gole ay soo doorteen. In shacbiga Soomaaliyeed, Siyaasiyiinta, hey’adaha caalamiga ah iyo wadamada shisheeye intaba ay ogaadaan in xeerka qaranka iyo xaqa shacbigu yihiin laguma xad gudbaan waa lagama maarmaan.
Haddii ay hirgasho in xeer aan shacbigu qeyb ka ahayn laga ansixin karo Soomaaliya, waxaan suurto galineynaa in shacbiga Soomaaliyeed la xaqiro oo aan lagala tashan aayaha dalkooda iyo in shaqsiyaad iyo dano gaar ah laga hormariyo rabitaanka shacbiga iyo dantooda guud. Nagala qeyb qaado ka hortagga xaqiraadda la xaqirayo shacbiga Soomaaliyeed ay xaqirayaan Mahiga iyo Wadamada Shsisheeye.
Hoos ka daawo fiidiyowga